'I Robert Mugabe tender my resignation with immediate effect', Zimbabwean President finally bowns out
‘I Robert Mugabe tender my resignation with immediate effect’, Zimbabwean President finally bowns out
Zimbabwean longest reigned president, Robert Mugabe, has finally left office after 37 years in office, as his autocratic control and brutality comes to an end within days of uproar from military.
The 93 year old assumed power since independence of Zimbabwe in 1980.
The news about Mugabe’s resignation was broken by the parliament speaker to a special joint session of the assembly after plan to impeach him, which was welcome by wild cheering and car horns from streets of the capital Harare.
Speaker Jacob Mudenda, reading the letter said, “I Robert Gabriel Mugabe in terms of section 96 of the constitution of Zimbabwe hereby formally tender my resignation… with immediate effect.
Mugabe given immunity, to live in home country under protection
Buhari addresses Liberian political crisis as he receives ECOWAS Chairman
What Mugabe will be doing after resignation – nephew reveals
Emerson Mnangagwa sworn in as new Zimbabwe President
When will Nigeria’s Mugabes resign?
President Mugabe’s resignation letter [FULL TEXT]
Mugabe: I’m still in power
Mugabe talks with South African diplomats in Harare
President Mugabe of Zimbabwe to retire at 99…continues if he has energy